Hotline Khabar | News Website कालो धनले चुनाव जित्ने ठेकेदार सांसदले हाम्रो बेइज्जत गरेः रामनारायण विडारी – Hotline Khabar
कालो धनले चुनाव जित्ने ठेकेदार सांसदले हाम्रो बेइज्जत गरेः रामनारायण विडारी
४ भाद्र, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ४ भदौ । नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने बेला भयो । पहिले पञ्चालयतकालमा नेपालमा राम्रा–राम्रा ठेकेदार थिएनन् । नेपालीसँग पैसा पनि थिएन । औजार मेसिन पनि थिएन । त्यसकारण त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्यो भनेर ठेकेदारहरुलाई मेसिन किन्न, ठूलाठूला मेसिन निकासी गरेर विदेशबाट आयात गर्न भनेर ठेक्का स्वीकृत हुनासाथ कूल ठेक्काको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी पैसा दिने भन्ने नियम बनाइयो ।
त्यसलाई बहुदल आएपछि पनि राम्रो काम गर्यो भनेर त्यो बेलाका राजनीतिक दल र सरकारले ठिक छ भनेर फेरी त्यही नियम लागू गर्यो । तर, समस्या पर्यो । अहिले के समस्या पर्यो भने मेसिन औजार प्रशस्तै भइसकेका ठेकेदार ‘क’ श्रेणीका खराब–खराब कारोबार गर्ने ठेकेदारहरुले पनि नेपालमा त्यही २५ प्रतिशत लिनका लागि मोबाइलाइजेसन रकम वा चालू रकम भनेर वा मेसिन किन्न त्यो प्रकारको संयन्त्रहरुलाई जोड्न पैसा दिन थालियो तर, बिडम्बना त्यो पैसाले ठेकेदारहरुले ठेक्कापट्टाको काम छोडेर जग्गामा लगानी गरे । विदेशमा लगानी गरे । सरकारको पैसालाई उडाउने काम गरे ।
खरबौं रुपैयाँका परियोजना, पुल, सडकहरु अलपत्र पारे । देशमा सारा योजना अलपत्र पर्यो । रातारात पेटी ठेकेदारहरु अरबपति बन्ने भए । ति पेटी ठेकेदार अरबपति बनेपछि चुनाव लड्न थाले । अनि जिन्दगी भर राजनीति गरेका राजनीतिज्ञलगायत कार्यकर्ताको विरुद्धमा गुन्डा लगाएर कालो पैसा प्रयोग गरेर चुनाव जित्न सफल पनि भए । अब संसदमा आएर ति कालो धनको बाढी बगाएर लोभी पापीलाई किनेर चुनावमा धक्कु लगाएर, चुनाव जितेको नाकट गरेर अनि संघीय संसददेखि प्रदेश संसदसम्म कुप्रभाव पार्ने र दुरुत्साहन गरेर हैकम चलाउने काम गर्न थाले । पैसा लिने, जग्गा किन्ने दलाली गर्ने ।
यस्तो काम गरेर संसदमा आएर हैरानी बनाउने थाले । जनविरोधी कानुनहरु बनाउन थाले, ठेकेदारका हितका निम्ती जनताका हितमा निर्माण कार्य नगर्नका निम्ति सरकारी पेश्कीले काम गर्न थाल्यो । पैसा सरकारको, पैसा नेपाली जनताको रजाँइ ठेकेदारको । संसदमा कानुन बनाउनेदेखि लिएर सारा काम बेठिक गर्न थाल्यो । गाउँगाउँमा विभिन्न सामानहरु फलानो माननीयले बाँढ्यो । आज कम्प्युटर बाँड्यो । माननीयले त तलब पनि लिन्न भन्यो, भत्ता पनि लिन्न भन्यो भनेर धक्कु लगाएर अरु सारा सांसदहरुलाई बेइज्जती गराउने काम पनि गर्न थाले । यसमा हाम्रो सरकारलाई थाहा छ कि छैन् । हिजोको सरकारले यो प्रथा चलायो । अहिलेको सरकारलाई यो जानकारी छ कि छैन् । यदी जनाकारी छैन् भने मैले जानकारी गराएँ ।
सरकारी ठेक्काबाट पैसा लिने त्यो पैसा कर्मचारीले रातारात त्यो पैसा दिन्छन् फेरी ! त्यो २५ प्रतिशत पैसा स्वीकृत भयो । भोली बिहान मिर्मिरे उज्यालो हुँदा चेक काटिसक्यो । कस्ता कर्मचारी ? कति इमान्दार कर्मचारी ? कस्ता बडा हाकिम । ‘आपका गए न बापका गए’ भन्ने एउटा उखानै छ नि । लुटेको धनको … को सराद्धे भन्ने उखान छ नि ! पैसा सरकारको पैसा जनताको मोज काला बजारिया र ति अपराधिहरुको । फेरी स्वर चर्काउने पो छ त ।
मत मान्य हैट ! भन्दै हप्की दप्की लगाउँदै गाउँमा गुण्डाहरुलाई जड्याहाँ बनाउँदै जनताको बैंकको बचत हत्याउने । भाइको पैसा तिरेझैं हत्याउने । कस्ता अपराध टिक्न गर्न सकिराखेका छन् ? देश निर्माण ठप्प भयो । ठूला नेता रिझाउन पनि तिनै ठेकेदार जान्ने । कसरी रिझाउँछन् मलाई थाहा छैन् । रिझ्एको देखेर भनेको ! ट्वाकट्वाक नेताहरुलाई ठ्वाकठ्वाक हात मिलाइराखेका हुन्छन् । अनि चुनाव नै गञ्जागोल र विकृति पार्ने ।
संसदले कानुन बनाउँछ । संसदले कानुन बनाइसकेपछि अभियोजन कसले गर्ने भनेर संसदले कानुन बनाएर दिएको छ । तर, त्यो कामै मगर्न दिन्न भनेर श्री ३ तन्त्रे पिपासु, हुकुमी तन्त्रे पिपासुहरु सडकमा पिएचडी पास गरेको लाइसेन्स देखाउँदै म त डाक्टर भन्दै विदेशी दलालीसँग अनुसन्धानका कामलाई प्रभाव पार्ने ? खबरदार !
अनुसन्धान गरिस् भने । खबरदार अभियोजन गरिस भने यो त मेरो मान्छे भन्दै हुकुमेतन्त्र अपराधीहरु राजालाई भेटे नि मैले त भनेर नाक फैलाउँदै गणतन्त्रका विरुद्धमा नेपाली जनताको विरुद्धमा अपराध गर्ने काम व्यापक रुपमा गर्न खोजे । कानुन भन्दा ति माथि ? कस्ता ति ? प्रमाणपत्र हातमा बोकेका छन् । सडकमा टेप रेकर्डले बकवास गरेझैं बकवास गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई देशको चासो छैन् । यो देश सप्रे यही देशमा यो देश बिग्रिए विदेशमा ।
दुईतिर घरबार भएका ति अपराधीलाई देशको के माया । हवाइजहाज चढेर झिटीझ्याम्टा बोकेर विदेश जाँदैछन् । कहिले ति जापानमा पढाउँथे, कहिले बेलायतमा बस्थे । ति अपराधी भन्दा यो देश सप्रिए यही देशमा यो देश बिग्रिए पनि यही देशमा जीवन बिताउने सारा नेपालीको पक्षमा सरकारको ध्यान जाओस् । (बिडारीले राष्ट्रियसभामा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)